bloggerak – စာအုပ်မြို့တော်
Posted in: ဆောင်းပါးLeaveacomment
Posted in: Featured, ဆောင်းပါးTagged: ကဆုန်လပြည့်Leaveacomment
တိုက်ဆိုင်မှုရှိခဲ့လျှင်…. တစ်ခါတလေမှာ… ကိုယ့်ရဲ့အလေးနက်စကားတစ်ခွန်းကို မထီမြဲ့မြင်ပြုခံခဲ့ရတာတွေရှိမယ် တစ်ခါတလေမှာ.. ကိုယ့်ရဲ့စကားတစ်ခွန်းမဆုံးခင် နားမထောင်ဘဲ တစ်ဖက်ကိုအာရုံစိုက်သွားတာမျိုး တစ်ခါတလေမှာ.. ကိုယ့်ကိုရှောင်ဖယ်ထားကြတာမျိုး တစ်ခါတလေမှာ.. ကိုယ့်ကို ဟန်ဆောင်ပြီး ပက်သက်နေကြတယ်လို့ ခံစားမိတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့…. ဒီလိုမျိုးလေးတွေ မကြာခဏ ကြုံခဲ့ရတိုင်းလည်း တစ်ခါတလေ အလိုလိုနေရင်း အထီးကျန်မိသလိုလို၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ၀မ်းနည်းနေမိသလိုလိုနဲ့ သိပ် ခံစားရခက်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်မိတဲ့အခါ ကိုယ့်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့သူတွေကိုမှ ကိုယ်က ဂရုစိုက်နေမိတာ က အဓိက ပြဿနာဖြစ်နေတာပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ…. မိဘတွေရှိမယ်၊ ညီအကိုမောင်နှမတွေရှိမယ် သူတို့နဲ့စကား စ,မြည်ပြောနိုင်တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ… မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေရှိသေးတယ် အဝေးက အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဆီကို သတိရကြောင်း မကြာမကြာဖုန်းဆက်လို့ရတယ် Messageလေး ပို့ကြည့်မယ်.. သတိရတဲ့အကြောင်းပေါ့ […]
Posted in: ဆောင်းပါး2 Comments
ဆရာမအကောင့်ကို ကျွန်တော် ဘလော့ခဲ့မိတယ် ( မျက်ရည်မခိုင်က မဖတ်ရ )
ကျွန်တော့် friend listထဲမှာ ဘယ်တုန်းကရောက်နေလဲ မသိဘူး။ ဒေါ်အုန်းကြည် တဲ့။ အင်္ဂလိပ်လို Daw Own Kyi ဆိုတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်။ သေချာကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော် မူလတန်းတုန်းက ဆရာမ။ တိတိကျကျ ပြောရ ရင် သူငယ်တန်းကနေ လေးတန်းအထိ ရင်ခွင်ပိုက်စနစ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့အတန်းကို တောက်လျှောက် အတန်းပိုင်လုပ်လာတဲ့ဆရာမ။ တစ်မြို့ထဲပေမယ့် ရပ်ကွက်ချင်း ဝေးပါတယ်။ ဆရာမက အပျိုကြီး။ ခုတော့ အသက်ကြီးနေပါပြီ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက သွားခေါခေါနဲ့။ ခု ပိန်တော့ သွားက ပိုငေါထွက်နေတယ်။ ဆရာမက ရုပ်တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ တတုံတုံနဲ့ messengerက စာတွေဝင်နေတယ်။ ဆရာမဒေါ်အုံးကြည်ပဲ နေမှာ။ တစ်နေ့ကလည်း ပြောပြီးပြီကို။ သူမေးတာတွေအကုန်ဖြေပြီးပြီလေ။ အခု ကျွန်တော် ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့အကြောင်း။ ကောင်မလေးရည်းစား မရှိကြောင်း မထားကြောင်းလည်း […]
Posted in: ၀တ္တုတိုLeaveacomment
“မင်းဟာ အမြင့်မှာနေရင် လေတိုက်ခံရမယ် အနိမ့်မှာနေရင် လှံစိုက်ခံရမယ်”
မင်းဟာ အမြင့်မှာနေရင် လေတိုက်ခံရမယ် အနိမ့်မှာနေရင် လှံစိုက်ခံရမယ် အလယ်မှာနေရင် မင်းကိုပုခုံးချင်းယှဉ်တိုက်လိမ့်မယ် ဘေးထွက်နေရင် မကောင်းပြောကြလိမ့်မယ် ။ မင်းကမနေနိုင်လို့လုပ်ပေးတော့ အရူးထနေတာလို့ပြောကြမယ် မင်းဘာမှမလုပ်ပဲနေတော့ မင်းကို ငပျင်းလို့ပြောကြလိမ့်မယ် ။ ဒီမှာ မင်းကို မင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ချီးမွန်းတဲ့စကားထက် မင်းကိုကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ဖို့ မင်းရဲ့ မှားကွက်ကို စောင့်နေကြတယ် ။ မင်းအောင်မြင်နေတဲ့အချိန် မင်းကိုကပ်ဖားပြီး မင်းကျရှုံးတဲ့အချိန် မင်းကိုနှာခေါင်းရှုံ့ကြလိမ့်မယ် ။ ။ မျက်နှာဖုံးစွပ်တွေများတဲ့လောကကြီးထဲမှာ မိတ်ဆွေကောင်း အင်မတန်ရှားပါးတယ် ။ မင်းမှန်တယ်ထင်ရင် တကယ်လည်းမှန်နေရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မင်းသိပ်ပြီးဂရုမစိုက်နဲ့ ။ မင်းစားနေတဲ့ထမင်းလုပ်အတွက် မင်းကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်နေတာမို့ မင်းမှာ အဲ့လောက်တော့ မာန ရှိသင့်တယ် ။ ။ အထီးကျန်နေရလို့လည်း စိတ်မပျက်နဲ့ […]
မြန်မာ လူမျိုးတွေ အပေါ် ပညာရှင်တစ်ဦး၏ ဖြေကြားချက်
မြန်မာလူမျိုးတွေ စေတနာကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ အများစု ဆင်းရဲနေကြသလဲ??? ကောင်းလိုက်တဲ့ မေးခွန်း။ ဒါကို ပညာရှင် တစ်ယောက်က ဒီလို ဖြေသွားပါတယ်။ (၁) မြန်မာအများစုက (TEAM WORK) အားနည်းတယ်။ မညီညွတ် ဘူး။ (၂) ဘေးကနေ သွေးခွဲရ လွယ်တယ်။ (၃) မနာလိုစိတ် များတယ်။ (၄) အချင်းချင်း ထဲ ကိုယ့်ထက် သာသွားမှာ မလိုလားဘူး။ သာရင် လည်း မနာလိုဘူး။ (၅) သူများကို ချီးကျူးရင် မကြိုက်ဘူး။ ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချီးကျူး စေချင်တယ်။ (၆) မုဒိတာ မပွါးနိုင်ဘူး။ (၇) ကြိုးစားရမယ့် နေရာတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ မရှိဘူး။ (၈) သူများမလုပ်ရင် မလုပ်ချင်ဘူး။ (၉) […]
Posted in: Featured, ဆောင်းပါးLeaveacomment
“လူငယ်တွေ အနေနဲ့ သိထားသင့်တဲ့ အချက် (၁၃)ချက်”
လူလောကကြီးက အကုန်လုံးအတွက် တူညီသော အခွင့်အရေး ကို ပေးလိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါ။ လူလောကကြီးအကြောင်း အသက် ၂၀ မတိုင်ခင်မှာတော့ မိဘတွေက သိပ်ပြီးပြောမှာမဟုတ်ပါ။ အသက် ၂၀ ကျော်လာပြီပြန်ရင်လည်း ကိုယ်ရဲ့သားသမီးကို လူ့လောကကြီးအကြောင်းကို သင်ပေးသူရှိသလို မသင်ပေးသူ လည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ မသိသေးသောသူများအတွက် အသက် ၂၀ ကျော် အရွယ်မှာ ဘာကိုလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ ကို ပြောပြပါရစေ။ ၀၁. အလုပ်က အရေးကြီးပါတယ်။ အလုပ်ရှိဖို့ဆိုတာ အရေးကြီးသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းတတ်နေသေးရင်တော့ အလုပ်လုပ်ဖို့မလိုပင်မဲ့ ကျောင်းပြီးရင် တော့ အလုပ်ကို လုပ်ရပါတော့မယ်။ အလုပ်ဝင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးက အလုပ်ထဲမှာပဲ အချိန်ကုန်နေတယ်လို့ မတွေးပါနဲ့။ ကိုယ်က စိတ်ပါဝင်စား လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကို ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ဒါမှသာလျှင် အလုပ်ကနေ ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ရာ […]
၁) မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန် (Michael Jordan) ကမ္ဘာကျော်ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားကြီးဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ဟာ သူ့ရဲ့ အထက်တန်းကျောင်း ဘတ်စကတ်ဘောအသင်းကနေ အပယ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ အခန်းတံခါးပိတ်ပြီး တစ်ယောက်ထဲ ငိုကြွေးခဲ့ရဖူးပါတယ်… ၂) စတိဗ်ဂျော့ (Steve Jobs) ကမ္ဘာကျော် Apple ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ စတိဗ်ဂျော့ဟာ အသက် ၃၀ အရွယ်မှာ သူစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီကနေ သူ့ကိုဖယ်ရှားခံလိုက်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းအားငယ်ပြီး ယူကျုံးမရခံစားခဲ့ရဖူးပါတယ်… ၃) ဝေါ့ဒစ္စနေး (Walt Disney) ဆန်းကြယ်ထူးခြားတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို ဖန်တီးလေ့ရှိတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်… animation ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေကို ရှေ့ဆောင်တီထွင်သူ… Disneyland ကို တည်ထောင်သူ ဝေါ့ဒစ္စနေးဟာ သတင်းစာတိုက်တစ်ခုကနေ “စိတ်ကူးစိတ်သန်းမကောင်းခြင်း” နဲ့ “ပင်ကိုယ်အတွေးအခေါ်မရှိခြင်း” ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်… ၄) ဘီတဲလ်စ် […]
☑ မျက်ရည်ကျတဲ့ အချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့။ မှားတတ်လို့ပါ။ အဲ့ဒီအချိ်န်မှာ အဆိုးမြင်စကားပြောခြင်းကိုလည်း နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ထိန်းပါ။ ☑ အခက်ခဲ ကိစ္စတစ်ခုကို အမြဲတွေးတော မနေပါစေနဲ့။ ခံစားချက်တိုင်းကို သင်ဆီမှာသောင်မတင်ပါစေနဲ့။ သင်မှာတိုင်ပင်စရာ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိဘတွေ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ ဘယ်လိုတွေပဲ အခက်ခဲတွေပဲကြုံခဲ့ နောက်ဆုံးပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ အခါမှာ သိပ်အရေးမကြီးတော့တာကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ☑ မှားမှာကို မကြောက်ပါနဲ့ ။ မှားခဲ့ရင်တောင် တွေးတော့ပူပန်မနေပါနဲ့ ။လူဘ၀ဆိုတာ အမှားအမှန်ဒွန်တွဲနေတာပါ။ သင်ခန်းစာယူပြီး အကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်သွားနိုင်ရင် ရပါပြီ။ ☑ အဆိုးမြင်စိတ်ဆိုတာ လူတွေမှာ အမြဲရှိတတ်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားချက်ကို ဦးစားမပေးဘဲ အကောင်းမြင်စိတ်လေး အစားထိုးပေးမယ်ဆိုရင် အားလုံးအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမှာပါ။ ☑ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို အဆက်သွယ်လုပ်ခြင်း၊ မလုပ်ခြင်း ၊ စကားပြောခြင်း၊မပြောခြင်း သာမာန်ကိစ္စတစ်ခုလို့ပဲ […]
” ပညာတတ်များ မေ့လျော့နေသော အမှန်တရားများ “
“Bruce Lee ပြောခဲ့တဲ့ မှတ်သားစရာစကားများ”
zin ko on “ကျွန်တော်ဘာလို့ အထီးကျန်နေအုံးမှာလဲ…. ?”